“महोत्सवको आम्दानीले भुरिगाउँबजारमा सौर्यबत्ती जडान गर्छौं” (अन्तरवार्ता) | BARDIYA ONLINE |
सुदीप अधिकारी | प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १३, २०७३ ।
बर्दियाको बबई नगरपालिका– १ भुरिगाउँ बजारमा यही माघ १४ गतेदेखि २४ गतेसम्म प्रथम बबई नगर उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन तथा सुचना प्रविधि महोत्सव–२०७३ संचालन हुँदैछ । बबई नगर उद्योग वाणिज्य संघ भुरिगाउँले पहिलो पटक महोत्सव आयोजना गरेको हो । बर्दिया निकुञ्जको काखैमा रहेको यो क्षेत्र पर्यटकिय क्षेत्रका रुपले महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस क्षेत्रमा महोत्सव संचालन गरेर यहाँको पर्यटकिय विकास, आन्तरिक व्यापार, लोक कला संस्कृतीको संरक्षण ,विकास तथा प्रवद्र्धन एव सुचना प्रविधीको पहुच बृद्धि गर्ने महोत्सवको उदेश्य रहेको छ ।
महोत्सवलाई सभ्य र भव्य बनाउन बबई नगर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापक तयारी गरिरहेको छ । मूल आयोजक समितिले महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा बबई नगर उद्योग वाणिज्य संघ भुरिगाउँका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक युवराज अधिकारीसँग हाम्रा सहकर्मी सुदीप अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
-महोत्सव आयोजना गर्नुको मुख्य उदेश्य के हो ?
महोत्सव आयोजना गर्नुको उदेश्य यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रियरुपमा प्रचारप्रसार गर्ने, यहाँको मौलिकता, संस्कृती, उद्योग, व्यापार र पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने नै हो ।
-गत वर्षपनि एउटा क्लबले लोक संस्कृती तथा पर्यटन प्रर्वद्धन भन्दै महोत्सव संचालन गरेका थियो । महोत्सव सफल हुन सकेने । यसपाली महोत्सव सफल हुने आधारहरु के हुन् ?
यस अघिको महोत्सव कसरी सफल भएन त्यो विषयले त्यती महात्व राख्दैन । कुनै एउटा र क्लबले आयोजना गर्नु र सिंगो व्यापारीको संस्थाले आयोजना गर्नुमा निश्चय नै फरक पर्छ । यो महोत्सवमा सम्पूर्ण व्यवसायी, कृषक तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुसँग हामीले समन्वय गरेका छौ । विशेषगरी CAN बर्दिया सह आयोजक नै छ । विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानको सहयोग छ । साथै राष्ट्रिय स्तरका कलाकार महोत्सवमा आउनु र समाजका सबै तहतप्कामा हामीले समन्वय गरेकाले यो महोत्सव सफल रहनेमा हामी विश्वस्त छौ ।
-महोत्सवमा के कस्ता व्यापारीक स्टल रहन्छ ?
महोत्सवमा विशेषगरी रमाइलो मेला, मौतका कुवा, सर्कस रहने छ । यसैगरी महोत्सवमा पहिलो पटक उँट, चौरी गाई र अष्ट्रिच पन्छी अवलोकनका लागि राखिने छ । यो दर्शकहरुको आर्कषणको केन्द्र रहने छ । यसका साथै सुचना प्रविधिको छुटटै स्टल रहने व्यवस्था मिलाएका छौ । व्यापारिक साथीहरुको पनि स्टल रहने छ । अटोमोवाइल्सको स्टल बुक भएको छ । मेलामा खाजा खानाका स्टल पनि रहने छ ।
-केही दिन अघि मात्र यस क्षेत्रमा माघी मेला लाग्यो । भर्खरै गुलरियामा महोत्सव सकिएको छ । लगत्तै तपाईहरुले यहाँ महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । यस अघिका मेला महोत्सवले यो महोत्सवलाई केही प्रभाव पार्दैन र ?
सही कुरा उठाउनु भयो । सम्पन्न भएका मेला महोत्सवले यो महोत्सवलाई खासै नराम्रो प्रभाव पर्दैन । माघी मेलाको महत्व र स्थान बेग्लै छ । भर्खरै सम्पन्न गुलरियाको महोत्सव भन्दा हाम्रो महोत्सवको प्रकृती फरक छ । साथै भुगोल पनि केही भिन्न छ । दुरीले नजिक भएपनि आवागमनले हामीलाई प्रभाव पार्ने स्थानमा गुलरियामा महोत्सव थिएन । तयसैले हाम्रो यो प्रथम बबई नगर उद्योग,व्यापार,कृषि, पर्यटन तथा सुचना प्रविधि महोत्सव उल्लोख्य रुपमा सफल हुनेछ ।
-पहिलो पटक महोत्सव आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । के कस्ता समस्या र चुनौती आइ परे ?
हरेक नयाँ कामको थालनी गर्दा समस्या, चुनौती र अवसर त आउछन नै । त्यसमा पनि यो झन सबैको चासो र महत्वको विषय भएकाले सबैलाई मिलाउन केही गाह्रो त भयो नै । साथै आयोजक व्यापार संघसँग आर्थिक नभएकाले अली गाह्रो त भएकै हो । तर पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौ ।
-महोत्सवमा कतीको कारोबार गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ ?
ग्रामिण भेग भएकाले शहर बजारको जस्तो महोत्सवमा कारोबार त न होला । तर पनि करिव ५ करोडको आसपासमा कारोबार हुनेमा हामी ढुक्क छौ ।
-महोत्सवबाट संकलन भएको बचत रकम कुन क्षेत्रमा खर्चिने सोच बनाउनु भएको छ ?
यो सबैको चासोको विषय हो की महोत्सवबाट भएको आम्दानी आयोजकले के मा खर्चन्छ भन्ने । हामीले विशेष गरी महोत्सवबाट भएको आम्दानी सडक सौर्यबत्तीमा र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने उदेश्य लिएका छौ ।
-यो महोत्सवको मुख्य आर्कषक के हो नि ?
अन्य महोत्सवमा हुने कुरा त सबै भइ नै हाले । हाम्रो महोत्सवको मुख्य आर्कषण भनेको उँट, चौरी गाई अष्ट्रिचको अवलोकन गर्न पाइने छ । यसका साथै दैनिकरुपमा स्थानिय तथा राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुतीले पनि मेलामा सर्बसाधारणको आर्कषण बढ्ने छ ।
-महोत्सवमा को को कलाकारलाई उतार्दै हुनुहुन्छ ?
कलाकारको प्रस्तुतीले नै महोत्सवको रौनक बढाउछ । दर्शकहरुलाई महोत्सवमा भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौ । त्यसैले हाम्रा राष्ट्रिय चर्चित कलाकार रेखा थापा, भुवन केसी, निखिल उप्रेती, चर्चित गायक राजेशपायल राई, प्रमोद खरेल, दुर्गेस थापालगाएत विभिन्न कलाकारलाई हामी महोत्सवको मञ्चमा उतार्ने छौ ।
-अन्त्यमा महोत्सव सफल पार्न के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ ?
यो महोत्सव कुनै एक संघ संस्थाको मात्र होइन । हामी सबैको गरिमा हो । इज्जत हो । शान हो । महोत्सव सफल हुनै भनेको हामी समग्र जिल्लाबासीको सफलता हो । यो महोत्सव हाम्रो क्षेत्रलाई देश विदेशमा चिनाउने माध्यम पनि हो । अवसर पनि हो । त्यसैले हामी सबै यो महोत्सवलाई सफल पार्न आ आफनो स्थानबाट सहयोगमा जुट्नै पर्छ । महोत्सवको सफलताका लागि सबैले सहयोग पुर्याउन आयोजकको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
शिक्षा दिवसमा ठाकुरबाबाका उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यालय सम्मानीत (फोटो फिचर)